3 zvirongwa zveWindows zvaunogona kushandisa online muLinux | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft Office Online Peji Peji
Kana hafu yesimba iro vashandisi veLinux vakaisa mukukakavadzana nevashandisi veWindows nezve yakanakisa sisitimu yekushandisa, isu tanga taisa mukuvandudza iyo, ingadai rakave rakareba gore reLinux paDesktop.
Inofanira kuzivikanwa kuti muzvinhu zvakaita se cKuenderana nemafomati epfuma kana kuwanikwa kwemitambo kwakagadziridzwa zvakanyanya, kunyangwe iri kure nekuve mamiriro akakwana. Ndosaka tichipindura 3 Windows zvirongwa zvinogona kushandiswa online muLinux.
Ichokwadi ndechekuti kune zvirongwa izvo zvisina yakavhurwa sosi imwe nzira uye izvo zvisingatombo shandiswa kushandisa Waini. Zvisinei, nekuda kwegore, tinogona kuzvishandisa pasina kushandura masisitimu anoshanda.
Ngatibude pachena. Hapana chimwe chezvirongwa izvi chemahara software, uye mune dzakawanda zviitiko iwe unofanirwa kubhadhara rezinesi kuti uzvishandise.
1.1 Zvimwe zvinhu zvekuchengetedza mupfungwa.
3 Abby mutungamiriri
Kana iwe wakapinda chikoro chako chesekondari kana kuyunivhesiti kutanga kwegumi gumi rapfuura, zvirokwazvo iwe wakasangana neruzivo rwekugovana zvinyorwa zvemavara kana maspredishiti kune vaunodzidza navo kana vadzidzisi. Zvinhu zvakaita sematafura, zvinyorwa, kana macro hazvina kumboshanda mushe muOpenOffice.
Zvimwe zvinogoverwa zvakaita seUbuntu zvinosanganisirwa muzvinyorwa zvavo zveIzwi kana Excel gwaro vaoni vaishanda pasi peWine. Asi izvo hazvina kushanda pakuzvigadzirisa.
Kutenda kune Iyo Gwaro Foundation uye LibreOffice, nyaya yekuenderana yakagadziridzwa zvakanyanya. Uye kana LibreOffice ikasashanda, tinogona kushandisa WPS Office, Softmaker Hofisi kana yekutanga nzira dzepamhepo; Zvinyorwa zveGoogle.
Asi zvakare tinogona kushandisa online vhezheni yeMicrosoft Office, inonyanya kuzivikanwa uye inonyanya kufarirwa yemahofisi emahofisi.
Kusiyana neiyo desktop desktop, haina kusanganisira maneja wedhatabhesi. Rondedzero yemasevhisi inosanganisirwa:
Shoko: Izwi processor.
Powerpoint: Chirongwa chekupa.
OneNote: Smart notepad.
Fomu: Online fomu anovaka
Karenda: Karenda maneja.
Vakafonera: Bata maneja
Sway: Inopindirana Zvemukati Musiki
OneDrive: Faira kuchengetedza.
Outlook: Mutengi wemeyili uye maneja webasa.
Zvimwe zvinhu zvekuchengetedza mupfungwa.
Zvese izvi zvekushandisa pamhepo zvinogona kuyanana uye kuwiriranisa pamwe neanowirirana desktop shanduro yeWindows ne Mac.
Ehe saizvozvo pachave nemusiyano pakati pekushandisa iyo desktop vhezheni uye yepamhepo vhezheni.
Semuenzaniso mushandisi yekushandisa yeIzwi kurongedzwa peji, margins kana mabhureji epapeji, mabutiro kana misoro uye tsoka hazviratidzwe. Pamusoro pezvo, mhando zhinji dzezvinhu dzinoratidzwa sevachengeti venzvimbo. Iyo peji remberi haigone kuchinjika chero.
Nezve mafaera, izvo zvinodzivirirwa ne password hazvigone kuvhurwa kana kushandurwa. Kana kuenda kwenzvimbo dzekubatanidza hakugone kuchinjwa.
Munyaya ye Excel mafaera anoda kushandiswa kweAlex X, mafomu ekudzora, masiginecha edhijitari haaratidzwe kana mune dzimwe nguva kubatana kwedata.
Mamwe mabasa anogona kuzvibata zvakasiyana mune online uye desktop shanduro.
Adobe Photoshop Lightroom chishandiso chepamhepo chekuchengetera, kuronga, uye kugadzirisa foto muunganidzwa.
Iyo kambani yakagara yakaronga kusiya echinyakare desktop desktop kune gore-based services. Imwe yematanho ekutanga inotorwa pamwe nekushandisa kwayo kwekugadzirisa, kuronga, kuchengeta uye kugovana mafoto Adobe Photoshop Lightroom.
Chirongwa chinotendera chitoro mifananidzo mumaalbum, share them pa Twitter, Facebook uye kuburikidza newebhu uye vape mazita.
Mimwe mhedzisiro inowanikwa inotibvumidza isu kuti tishandure saizi yemufananidzo, kushandura iyo chimiro chimiro, shandura musiyano, gadzirisa tarisiro uye gadziridza mwenje, kuzadza kana kusimba.
Abby finereader online webhusaiti webhusaiti.
Kwenguva yakareba Abby Finereader ndicho chete chikonzero chakanditadzisa kuburitsa Windows kubva pakombuta yangu. Zvanga zviri hapana mubvunzo iri rakanakisa Optical hunhu inozivikanwa chirongwa yeWindows, uye paLinux pakanga pasina imwe nzira inobatsira.
Optical Hunhu Kuzivikanwa Zvirongwa ratidza otomatiki kubva pamufananidzo, zviratidzo kana mavara ari eimwe mavara, uye wozoachengeta se data. Mhedzisiro yacho inogona kushandiswa nehurongwa hwekugadzirisa zvinyorwa.
Abby vagadziri vepo vaive vatora tekinoroji yavo kuLinux, asi hapana aifarira kuwedzera graphical interface kwairi.
Neshanduro yemahara iwe unogona kuziva kusvika pamapeji gumi pamwedzi. Mhedzisiro yacho inogona kutumirwa kune Microsoft Office, pdf, epub uye fbr mafomati. Tinogona kuita yekuchengetedza pakombuta kana mune yekuchengetedza gore sevhisi.
Dambudziko hombe naAbby Finereader Online nderekuti haina chigadzirwa chepakati. Inoenda kubva kune yemahara vhezheni ine mashanu kana gumi mapeji pamwedzi kuenda kune yemubatanidzwa kunyoreswa iyo inokutendera iwe zviuru zvishanu mapeji pagore nemubhadharo wepagore we $ 5.
Ose maviri Microsoft Office 365 uye Adobe Lightroom CC anowanikwa pasi pemarezinesi ekubhadhara emwedzi nemwedzi, pamitengo isingadhuri uye pasina chero rudzi rwezvirambidzo zvekushandisa.
Microsoft Office pamhepo.
Abby Finereader pamhepo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » 3 zvirongwa zveWindows zvaunogona kushandisa online muLinux
Mukudaro, ini handipotse iyo online suite, kana hofisi suite zvakajairika.
Ini ndinotenda uye ndinozvisimbisa kubva pane zvakaitika kwandiri, kuti kune mushandisi akajairwa, neLibreoffice pane zvakawanda zvekuita hofisi otomatiki mabasa.
Zvimwe chete neayo adobe suite. Kuve nezvirongwa zvakaita seGimp, Krita, Digikam, Rima, hazvidi kuti ini ndishandise iyo adobe suite kune izvi zvinangwa.
Ini handigone kutaura nezvaAbby nekuti ini handina kuishandisa, uye ipapo zvinokwanisika kuti iri sarudzo yakanaka kana pasina imwe yakavimbika imwe mu linux.